दुलेगौंडामा तनहुँ सेवा अस्पताल सञ्चालन - Enepalese.com
दुलेगौंडामा तनहुँ सेवा अस्पताल सञ्चालन
इनेप्लिज २०७१ पुष २८ गते १६:४४ मा प्रकाशित
दुलेगौंडा– शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको दुलेगौंडामा आजदेखि तनहुँ सेवा अस्पताल सञ्चालन भएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना गरिएको २५ बेडको अस्पतालको स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले उदघाटन गर्नुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले यस क्षेत्रका विरामिलाई अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने बताउनु भयो । सकारले तोके बमोजिम निःशुल्क उपचारको घोषणा सुरुमै अस्पतालले गरेकोमा उहाँले स¥हाना गर्नुभयो ।
दुलेगौंडा आसपास मात्र नभइ कास्की, स्याङजा, पाल्पा समेतका बासिन्दालाई पायक पर्ने अस्पतालमा २४ सै घण्टा उपचार सेवाको व्यवस्था गरिएको छ । पृथ्वी राजमार्गसंग जोडिएको यस अस्पतालले दुर्घटनाका बिरामीलाई पनि स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने छ । अस्पतालमा ंरगत, दिशा, पिसाव, खकारका बिभिन्न रोगहरु हेर्ने प्रयोगशाला, एक्स रे, भिडियो एक्स रे, फिजियो थेरापी सबैको व्यवस्था छ । सो अस्पतालमै माइनर अपरेशन समेत गरिने छ । जनरल वार्ड र पोष्ट अप वार्ड समेत राखिएको छ ।
उदघाटन समारोहमा सभासद टुकराज सिग्देल र आशा खनालले सामान्य उपचारका लागि पनि पोखरा र काठमाण्डौं पु¥याउनुपर्ने यो भेगमा अस्पताल खोल्नेहरुलाइ धन्यवाद दिनुभयो ।
तनहुँ सेवा अस्पतालका अध्यक्ष हरी खड्काको सभापतित्वमा भएको समारोहमा तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णराज पण्डित, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हरिराम नागिला, तनहुँ सेवा अस्पतालका कम्पनी सचिव धनञ्जय वाग्ले, अस्पतालका सञ्चालक एवं कास्की सेवा अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डा. पदमबहादुर खडकालले बोल्नु भएको थियो ।
दुलेगौंडाका नौ जना स्थानीय र कास्की सेवा अस्पतालको संयुक्तलगानीमा अस्पताल खोलिएको हो । त्यसमादुई करोड ८५ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
स्वागत मन्तव्यमा डा. पदमवहादुर खड्काले शहर बाहिर व्यवसायका लागि भन्दा पनि सेवाका लागि अस्पतपाल खोलिएको भन्दै डा. खड्काले अस्पताल सबैको मन्दीर भएकोले त्यसलाइ बलियो बनाएर गुणस्तरीय उपचार दिनसक्ने बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘मानव सेवाकालागि सेवा दिने र लिने दुवै पक्ष जिम्मेवार हुन जरुरी छ’ डा. खड्काले भन्नुभयो, ‘सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थय सेवा प्रदान गर्न सामुदायिक स्वास्थ्य विमा, आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्तिको खाँचो पुरा गर्न सरकार गम्भिर हुनुपर्छ ।’
दुलेगौंडामा अब २४ सै घण्टा डाक्टर
सामान्य विरामी पर्नासाथ पोखरा र काठमाण्डौ पु¥याउनुपर्ने दुलेगौंडामा अब २४ सै घण्टा डाक्टरको सेवा विरामीले पाउने भएका छन् । तनहुँ सेवा अस्पतालले आवासीय रुपमै डाक्टरलाइ नियुक्ति गरेपछी यस भेगका विरामीलाइ जतिबेला पनि डाक्टरबाट जचाउने सुविधा मिलेको हो ।
डाक्टर हरेक दिन फिजिसियन डाक्टर तथा अन्य दिनहरुमा पालै पालो नियमित बिशेषज्ञ डाक्टरहरुवाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यबस्था मिलाइएको छ । हाल सो अस्पतालमा फुल टाईम तथा पार्ट टाईम गरी १४ जना डाक्टरहरुको कार्यरत रहेको पनि अध्यक्ष हरी खड्काले बताउनुभयो ।